War Baa U Gaajo Badan! | Somaliland.Org
December 30, 2012	Waa la isku raacsan yahay badi ba in warku maanta u dhigmo oo la maqaam yahay quutal daruuriga maalinlaha ah ee afka iyo gacanta aadanaha u dhexeeya, Soomaalida na waxa ba lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay quruumaha ugu warka iyo wacaasha jecel. Soomaalidu waa “war ku nool” baa la yidhaahdaa. Marka laba nin oo dheelmanayaa dalandool ahaan meel cidla’waaqla’ ah ugu kulmaan waxa ay isku nabdaadiyaan “Waar maxaa la sheegay” oo nuxurka ka dambeeyaa yahay “maxaa war la hayaa” Xilligii dagaalkii Labaad uu adduunka ka holcayey, ayaa maamulayaashii gumaysiga Ingiriiska ee Somaliland haystey loo sheegay in dadkii Soomaalidu is gaadhsiiyeen warar tibaaxaya in ciidamadii Ingiriiska ee dagaalkaas ku jirey lagu wiiqay Hindiya, Burma iyo Bariga Fog oo laga adkaaday. Xilligaas ma jirin sida maanta warbaahin casri ah iyo teknoolijiyaddan xiimaysaa midkoodna, waxaana Ingiriisku la yaabay sida dadka Soomaalidu wararkaas u heleen iyo sida dhakhsaha badan ee ay ugu dhex faafeen.
Waxa la yidhi waxa uu Ingiriiskii isugu yeedhay raggii gabyaaga ahaa ee beelaha dhexdooda ka sheegganaa. Waxa uu u qaybiyey lacag iyo dhar ay ugu mudnaayeen laba go’ oo cadcad oo bafto ah oo xilligaas lagu xarragoon jirey. Waxa uu yidhi ka gabya dagaalka oo tilmaama in Ingiriisku kaga gacan sarreeyo cid kasta goobaha lagu dagaallamayo ee Bariga Fog iyo meelaha kaleba. Ingiriisku waxa uu ogaa in gabaygu Soomaalida ugu jirey waagaas halka caalamka kale ay ugu jireen idaacadaha iyo jaraa’idku.
Mar haddaan ka gabyey
England baa gubanaysa
Maxaa iiga gidhiish ah!
Warfidiyeenkii Soomaalida ee xilliyadaasi hore tuf iyo tisqaad buu lahaa. Xaaji Cabdi Ayuub, Mustafe Xaajii Nuur, Cismaan Sugulle, Yaasiin X. Ismaaciil Jirde, Cabdikariim X. Ducaale, Saleebaan Daahir Afgarshe, Cabdillaahi Xaaji ilaa xilligii dhexe Maxamuud Sheekh Dalmar, Maxamuud Cabdi Cali Ducaale, Maxamed-rashiid Sheekh Xasan, Yoonis Cali Nuur, Aadan Nuux Dhuule, Maxamed Aadan Teerra, Saynab Maxamed Jaamac, Maxamed Cali Weji, Maxamed Carab Falaxfalax, Siciid Faarax, Axmed Xasan Cawke iyo qaar kaloo badan ayaa cod iyo luuq warfidiyeennimo si la yaab leh dadka dhexdiisa ugaga hanaqaaday oo magacyadoodu sida birlabta maanka in badan ugu dhegeen. “Wax kale iyo Cismaan Sugulle” ayaa la odhan jirey, weli na la yidhaahdaa, marka wax wanaagsan ama xiise leh la la kulmo. “Dayax-gacmeed, cir-bixiyeen, warfidiyeen, diyaaradaha qumaatiga u kaca, maraakiibta badda hoosteeda quusta (gujis), gantaalaha riddada dheer, diyaaradaha guuxooda ka dheereeya, gantaalaha is wada, waddamada Barwaaqo-sooranka, Gaashaanbuurta Reer Bari (Warsow) iyo Is-bahaysiga Reer Galbeed (Nato), hirka gaaban iyo hirarka dhaadheer” iyo boqollaal kale oo erey-bixin cusub ahayd ayaa sida il-biyeed irmaan ugu soo burqan jirey maalin kasta maskaxda iyo afka warfidiyeenkaas oo aynu ka baran jirney. Toolmoonida codkooda, erey-xulasho-wanaaggooda iyo aqoonta ay u lahaayeen mihnaddooda warfidiyeennimo ayaa raad-reebka iyo saamayntu ka soo jeeddaa, waayuhu na sida xilligan ma cilladaysnayn oo berisamaadkii fanka iyo fufkii horusocodka Soomaalida ayay qaarkood la dhasheen, qaarkood kale na daba-goosteen. Soomaalida iyo Warfaafinta Maanta
Muddarrooyinkaas iyo meel-ka-dhacyadooda, iyo xanafta iyo xumaantooda waxa keenaya dadka aan is-taahilin in dhaayaha daawadayaasha la hor keeno ama dhawaqooda dhegta dadka la maqashiiyo ee aaladaha warfaafinta maantu wadwadkooda meheradda ka dhigtaan. Is-taahilid la’aantu waa marka la eego waxa ay ka hadlayaan oo ujeeddo iyo nuxur ahaan ka hooseeya heerkii loo baahnaa habraac ahaan, sida liidata ee ay u soo bandhigayaan, xilkasnimo darridooda iyo sida ay uga baraad la’ yihiin garaad ahaan in dad si wali ba u kala duwani ay meelo kala duwan uga daawanayaan, uga dhegaysanayaan ama uga akhrisanayaan. Waxa kale oo aynu kula kulannaa war-ku-sheeg aan u qalmin isna in la sii daayo oo warka madaxdiisa ku mulaaqan. Eedda iyo gabbood-falka warfidiyeenku leeyahay waxa ka badan ta ay yeelanayaan mulkiilayaasha hay’adaha warfaafineed iska leh sida TV-yada iwm. Ayaandarradu waa in qof ama koox kasta oo lacag haystaa qaradka iyo muraadkeeda ay ku fushan karto oo u adeegsan karto aaladaha warbaahineed ee maanta intooda badan, gaar ahaan badiba TV-yada hadda laabta la soo kacaya ee tiradoodu soo kordhayso ee gaarka loo leeyahay. Wax kasta oo ay sitaan iyo ujeeddo kasta oo ay leeyihiin ba, waxa loo ballaqaa albaabka, iyada oo loo furayo mikrifoonka iyo carooggiisa hawada geliya ba. “Waa intaad bixiso uun ku hadal” xaalkoodu! Caalamka kale taasi kama dhacdo oo warku ma aha “xayaysiin iyo ii dheh” warfaafinta lacag ay ku sii dayso laga siiyo, haddii ay dhacdo na waa fal-dembiyeed u dhigma musuqa foosha xun ee ciddii gasha dacwadda lagu soo oogo, waayo war baahintiis bay hay’ad aan sii dayseen laaluush laga siiyey markaas bay sidaas ku faafisay!
Halkaas waxa ku god gelaya oo ku gedmanaya anshaxii warka iyo wacaaluhu lahaayeen ee loo baahnaa in soohdintiisa lagu ekaado oo aan laga gudbin. Waa asalraacii iyo runnimadii warka iyo dhexnimadiisii, akhlaaqdii sheegmada iyo tii warfaafineed ama tebineed. Waxa lumaya feejignaantii muhiimka ahayd ee mas’uuliyadda iyo tii xilkasnimada ee warfidiyeennimo . Taas waxa ka sii daran ku galgalashada xuquuqaha reebban ee hal-abuur gaar ahi leeyahay oo iyana aan loo aabba-yeelin, inta badan na aad loogu tunto. Maqaal dhan ama sheeko qoraa lahaa oo macruuf ahayd ayaad maalin dambe ku arkaysaa magaca qof kale oo hoosta kaga xardhan! Dhanka xigashada ama wax soo dheegashada war meel laga soo qaato ama dheeg qoraal laga soo ergisto iyana waa arrin maanta aan loo tudhin, in badani na ay ku dul turunturrooto.
•	Maxaa dhacay?
•	Xaggee wax ka dhaceen?
•	Goorma ayay wax ka dhaceen?
•	Yay se wax ku dhaceen ama wax sameeyey?
•	Sidee bay wax u dhaceen?
•	Sababahee keenay waxa dhacay iyo waxyaalihii ku xeernaa ama xidhiidhka la lahaa?
Previous PostGuddoomiyeyaashii DALSAN iyo RAYS oo ka Hadlay Kulan Madaxweyne Siilaanyo u sameeyayNext PostHambalyo Meher Wacan	Blog